Sida loo Sameeyo Cusboonaysiinta Dhageysiga OS X El Capitan ee Macadkaaga
Macs Tilmaamaha & Tababarada
Cadaadiska shaashadda ee Coyote Moon, Inc.
OS X El Capitan mar kale waxay dajisaa rakibidda hagaajinta sida habka caadiga ah ee sameynta rakibidda. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad bilowdo inaad soo dejisato qalabkii El Capitan ee Mac App Store, oo aad u hesho qadar qaar ka mid ah shaaha markaad soo noqoto, waxay u egtahay in aad fiirin doontaa shaashadda lagu rakibay El Capitan si aad u gujiso Sii wad badhanka.
Sida jahwareerka ah ee laga yaabo in ay noqoto in la helo rakibaadda, waxaan ku talineynaa in aan ka fariisto rakibaha halkan iyo ka taxadarida qaar ka mid ah faahfaahinta aasaasiga ah.
Waxa aad ubaahantahay inaad gasho OS X El Capitan
El Capitan waxaa lagu dhawaaqay WWDC 2015 waxaana lagu wadi doonaa geedi socodka guud ee beta laga bilaabo July 2015, oo la dhamaystirayo fasax dadweyne 30 September, 2015. Ka hor intaadan go'aansan inaad ka qayb qaadato beta dadweynaha ama rakibo nidaamka cusub ee Mac operating mar marka la sii daayo , waa inaad eegtaa nooca Macsidu ay ku taageeri doonto OS, iyo waxa astaamaha ugu hooseeya ay yihiin. Waxaad ka ogaan kartaa haddii Macagu ujeeda baqshiinka adigoo eegaya tusahan:
Shuruudaha ugu yar ee OS X El Capitan
Markaad go'aansato in Macadaadu ay buuxiso shuruudaha, waxaad ku dhowdahay inaad sii wadato adoo rakibaya nidaamka cusub. Laakiin marka hore, waxaad u baahan tahay inaad qaadato talaabooyin horudhac ah si loo hubiyo in Macadkaagu diyaar u yahay inuu si guul leh u rakibo OS iyo in aad yeelan doonto nidaam rakibid la'aan dhib la'aan ah.
Ku soo celi Meeshi Kadib: Bixinta
Waan ogahay, kootarabtu waa caajis, aadna aad u badan tahay inaad la socoto rakibaad si aad u baari karto dhamaan sifooyinka cusub ee OS X El Capitan . Laakiin i rumee markaan ku yiraahdo OS cusub ayaa sugi doona adiga oo hubinaya in xogtaada hadda si nabadgelyo ah loo soo celiyo aysan ahayn wax la iska indha tiri karo.
Qalabixiyaha OS X El Capitan wuxuu sameyn doonaa isbeddel weyn Macadaada, ka tirtirida faylasha nidaamka, bedelida kuwa kale, dejinta rukhsiyada faylka cusub , xitaa kudhow faahfaahin faylasha kala duwan ee nidaamyada kala duwan iyo sidoo kale barnaamijyada qaar.
Dhamaan kuwan waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo sharraxaad lagu magacaabo jilbada quruxda badan. Laakiin hadday wax qalad ah sameeyaan inta lagu guda jiro nidaamka rakibida, waa Macadaada oo laga yaabo in ay ku dhamaato qaab xun.
Ha qaadin wax fursad ah xogtaada, marka naqshad fudud ay bixiso caymis weyn .
Noocyada Qalabaynta Taageerada OS X El Capitan
Goonku waa maalmo ka mid ah fursadaha rakiban ee adag, sida Archives iyo Install , kaas oo taageeray nidaamkaaga hadda ka dibna wuxuu sameeyey samaynta hagaajin. Apple mar kale waxay bixisaa laba hab oo rakibida aasaasiga ah: rakibidda hagaajinta, taas oo ah hannaankani hagaajin doono, iyo nadiifin nadiif ah.
Kusaabsan Ku rakib Lambarkaaga cusub ee OS X, wuxuu bedelayaa faylasha nidaamka nidaamsan, rakibo faylasha nidaamka cusub, dib u cusbooneysiinta rukhsadda faylka, cusbooneysiiso barnaamijyada Apple-ka ah, iyo rakibo barnaamijyo cusub oo Apple ah. Waxaa jira waxoogaa talaabooyin badan oo ku lug leh habka casriga ah, laakiin hal shay oo ah qalab casri ah ma sameyn doono isbedel kasta oo ka mid ah xogtaada isticmaalaha.
Inkasta oo rakibayaashu aysan taabanin xogtaada isticmaalahaaga, taasi micnaheedu maahan in xogta aan la beddeli doonin ugu dhakhsaha badan. Inta badan updates nidaamka weyn waxaa ka mid ah isbeddelada barnaamijyada Apple, waxana dhici karta in marka ugu horeysa ee aad isticmaasho barnaamijyada, sida Boostada ama Sawirrada , app laftiisa ayaa cusbooneysiin doona xogta la xiriira. Xaaladda E-mailka, xogtaada boostada ayaa laga yaabaa in la cusbooneysiiyo. Marka sawir laga qaado, iPhadkaaga hore ee iPhoto ama maktabadda muuqaalka ah waxaa laga yaabaa in la cusbooneysiiyo. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay tahay fikrad aad u fiican oo aad ku sameyn kartid nuqul ka hor inta aan la sameynin qalabka OS X; waxaad ka soo kaban kartaa wixii faylasha xogta ee loo baahan yahay oo laga yaabo in la cusbooneysiiyo, dabadeedna waxay kuu keeni kartaa dhibaato noocaas ah.
Nadiifinta Qaadku wuxuu magaciisa ka soo qaataa talaabada ugu horeysa ee nidaamka: Nadiifinta mugga bartilmaameedka nidaam kasta ama xogta isticmaalaha. Tan waxaa badanaa la sameeyaa iyadoo marka hore la tirtiro mugga bartilmaameedka kadibna lagu rakibo OS X El Capitan. Isticmaalida ikhtiyaarka rakibida ee nadiifka ah ayaa kaa tagaya Mac Mac ah oo aad u la mid ah Mac cusub oo cusub oo laga soo qaaday sanduuqa oo lagu rakibay markii ugu horeysay. Ma jiri doonto barnaamijyada saddexaad ee la rakibay, mana jirto adeegsade ama xog isticmaale. Marka Macashadaada ugu horreysa ay bilaabato ka dib qalab nadiif ah, hagaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah ayaa ku socon doona habka loo abuurayo xisaabi cusub.
Laga soo bilaabo halkaas, inta hartay waa adiga. Xulashada nadiifinta nadiifka ah waa hab wax ku ool ah oo loo bilaabi karo oo laga yaabo inay noqoto hab wanaagsan oo lagu rakibo OS cusub haddii aad dhibaato ka haysatid Macankaaga oo aanad kaliya sheegi karin. Waxaad wax badan ka ogaan kartaa:
Sida loo Fuliyo Nadiifinta Nadiif ah ee OS X El Capitan ee Macadkaaga
Aynu bilowno Hawlgal Goob Jadida ah
Tallaabada saddexaad ee hagaajinta OS X El Capitan waa in la hubiyo socodsiintaada bilowga ah ee khaladaadka iyo dayactirka waraaqaha.
Sug, sidee ku saabsan tallaabooyinka hal iyo laba? Waxaan malaynayaa in aad horay u sameysatey nuqul ah oo la hubiyey si loo hubiyo in Macadaadu ay buuxiso shuruudaha nidaamka ugu yar. Haddii aadan fulinin labadan tallaabo ee hore, dib ugu noqo bilawga boggan si aad u hesho macluumaad.
Waxaad ka hubin kartaa in Mackabaadkii Macruufka ee Macku uu qaab wanaagsan yahay iyo in faylasha nidaamka jira ay leeyihiin oggolaanshaha saxda ah, adigoo raacaya tusmadaan:
Isticmaalka Korontada Utility si Lakaliso Laabashada Darajooyinka iyo Disk Oggolaanshaha
Marka aad dhammeystirto tallaabooyinka hagaha kor ku xusan, waxaannu kuxadeynaynaa inaanu bilawno rakibidda dhabta ah, ka bilaw bogga.
La daabacay: 6/23/2015
La casriyeeyay: 9/10/2015
Sida loo soo saaro OS X El Capitan Diiwaanka Mac App
OS X El Capitan Installer ayaa si toos ah u bilaabi doona marka download laga soo dukaameysto Mac App Macalinka. Cadaadiska shaashadda ee Coyote Moon, Inc.
OS X El Capitan waxaa laga heli karaa Mac App Store iyadoo loo cusbooneysiiyo lacag la'aan oo loogu talagalay qof kasta oo maamula OS X Snow Leopard ama wakhti dambe. Haddii aad haysato Mac oo buuxiya shuruudaha nidaamka ugu yar ee El Capitan, laakiin wuxuu ku shaqeynayaa nidaam ka horeeya OS X Snow Leopard, waxaad marka hore u baahan doontaa inaad iibsato OS X Snow Leopard (laga helo dukaanka Apple), kadibna raac tilmaamahan si aad u rakibto Snow Leopard on Mac . Snow Leopard waa nooca ugu da'da ah ee OS X kaas oo heli kara App App Store.
Download OS X 10.11 (El Capitan) Laga soo bilaabo Dukaanka Mac App
La soo bandhigo Mac App Store adigoo gujinaya astaanta calaamadda ku yaala Dock
OS X El Capitan waxaa laga heli karaa dhinaca midigta midigta, kaliya hoosta qaybta Apple Apps. Waxa kale oo ay u badan tahay in si cad loogu soo bandhigo qeybta khaaska ah ee dukaanku muddo dheer ka dib markii la sii daayay.
Haddii aad tahay xubin ka tirsan kooxda OS X Public Beta oo aad heshay lambarkaaga beta helitaanka, waxaad ka heli doontaa El Capitan hoosta macaamilada ee ku yaalla dhinaca sare ee Mac App Store.
Xulo El Capitan app, oo riix badhanka Download.
Download waa weyn, iyo server Mac App Store aan loo yaqaan in ay noqdaan ugu dagdag ah ee xogta download, sidaas darteed waxaad heli doontaa xoogaa ah sugitaan.
Markii la soo dhameeystiro soo-galka, rakibaha OS X El Capitan wuxuu ku bilaabi doonaa isaga.
Waxaan kugula talineynaa in aan ka fariisto qalabka rakibidda, iyo qaadashada wakhti si aad u sameyso nuqul ka mid ah rakibida adoo isticmaalaya tusaalahan:
Abuuri OS Xidhaha Xidhmirka X El Capitan on USB Flash Drive
Talaabadani waa mid ikhtiyaari ah laakiin waxay noqon kartaa mid waxtar leh haddii aad haysato Macsiyo badan si aad u cusbooneysiiso sababtoo ah waxaad isticmaali kartaa qalabka casriga ah ee bootable USB si aad u maamusho qalabka, halkii aad ka soo dejisan lahayd OS ka Mac App Store oo kasta iyo Mac kasta oo aad rabto inaad cusboonaysiiso.
Aan u guurno si aan u bilawno rakibidda dhabta ah.
Ku bilaw Nidaamka Horumarinta Isticmaalka OS X El Capitan Installer
Qalabka bilowga ah ee faylasha OS X El Capitan wuxuu qaadan karaa 10 daqiiqo ilaa 45 daqiiqo, taas oo ku xidhan noocaada Mac iyo nooca lagu rakibay. Cadaadiska shaashadda ee Coyote Moon, Inc.
Waqtigan xaadirka ah, waxaad soo celisay xogtaada, hubisay in Macadaadu ay ka soo baxday shuruudaha loo yaqaan "El Capitan" , ka soo dejiyey rakibaha OS X El Capitan oo ka yimid Mac App, oo abuuray nuqul ka mid ah rakibaha OS X El Capitan aalada flash USB . Waxaad hadda bilaabi kartaa qalabka rakibida adigoo bilaabaya barnaamijka Install OS X El Capitan ee ku jira diiwaanka / Codsiyada Mac.
Ku bilaw Dhamaystirka Cusbooneysiinta
Qalabixiyaha wuxuu furayaa bandhigida daaqada OS X, oo ay weheliso badhanka Sii wadista xarun hoose. Haddii aad diyaar u tahay inaad tagto, riix badhanka Continue.
Shuruudaha liisanka ee OS X ayaa la soo bandhigayaa; akhri shatiga, oo guji badhanka Waalidka.
Xaashidu waxay hoos u dhigi doontaa, waydiineysaa inaad dib u xaqiijiso inaad ogolaato shuruudaha. Riix badhanka La'aanta.
Rakibta OS X Xulashadu waxay muujinaysaa mugga muraayadda hadda ee hada socda ee loogu talagalay rakibidda. Haddii tani ay tahay meesha saxda ah, riix badhanka rakibida.
Haddii tani aysan aheyn goobta saxda ah, oo aad haysato dhejiyo badan oo ku xiran Macadkaaga, riix 'Show All Disks' button, ka dibna dooro diskka meesha lagu soo dooranayo doorashooyinka la heli karo. Riix badhanka rakibida marka la diyaarinayo. Fiiro: Haddii aad isku dayeyso inaad sameyso rakib nadiif ah mugga kale, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixraacdo Hagaha Macluumaadka Soodhaweynta OS X Caddaan .
Gali sirtaada maamulaha, kadibna riix OK.
Qalabixiyuhu wuxuu koobi doonaa faylasha yar yar ee miisaanka loo yaqaan "destination" kadibna wuxuu ku bilaabi doonaa Mac.
Horumarka barashada ayaa soo bandhigi doona, qiyaasta ugu wanaagsan ee waqtiga ku haray. Qiyaasaha rakibida lama yaqaano inuu saxsan yahay, sidaa darteed u qaado nasasho kale.
Marka bararka horumarka la dhammeeyo, Macagu wuxuu ku bilaabi doonaa oo bilaabi doonaa nidaamka dejinta OS X El Capitan, halkaas oo aad ku bixiso macluumaadka qaabeynta si aad u sameysid doorbidkaaga shakhsi ahaaneed.
Wixii tilmaamo ku saabsan geeddi-socodka dejinta, sii wad.
OS X El Capitan Habka Dejinta ee Kor u Qaadista
ICloud Keychain waa mid ka mid ah waxyaabaha la kala dooran karo ee loo qaabeyn karo inta lagu jiro rakibidda. Cadaadiska shaashadda ee Coyote Moon, Inc.
Waqtigan xaadirka ah, rakibaadda El Capitan way dhammaatay waxayna muujineysaa shaashadda OS X login. Tani waa run xitaa haddii version hore ee OS X ayaa lagu dajiyay si toos ah Masraxa. Ha welwelin; ka dib waxaad isticmaali kartaa qaybta Nidaamka Xulashada si aad u dajiso jawiga ku haboon ee loo adeegsado habka aad rabto.
Xakamee OS X El Capitan User Settings
Gali eraygaaga sirta ah, kaddibna riix furaha ama soo celinta furaha. Waxaad sidoo kale riixi kartaa fallaadhka saxda ah ee ku xiga dhinaca astaanta furaha.
OS X El Capitan wuxuu bilaabayaa habka dejinta adoo waydiinaya Aqoonsigaaga Apple. Bixinta xogtan waxay u oggolaanaysaa in siyaasi loo dejiyo si toos ah loogu rakibo tiro doorasho oo ka mid ah isticmaalaha, oo ay ka mid yihiin habeynta xisaabtaada iCloud. Uma baahnid inaad bixiso Aqoonsigaaga Apple halkan; waxaad dooran kartaa inaad mar dambe sameyso ama aanad dhammaan. Laakiin bixinta macluumaadka ayaa ka dhigaysa in geedi-socodkii dejinta uu si deg-deg ah u socdo.
Waxaad siisaa lambarka Aqoonsiga Apple-ga, kadibna riix Sii wad.
Xaashidu waxay hoos u dhici doontaa, waydiisaneysaa inaad rabto inaad isticmaasho Find My Mac, adeegga iCloud kaas oo kuu ogolaanaya inaad hesho Mac-kaaga isticmaalka raadinta geolocation; waxaad xitaa xiri kartaa oo baabi'in kartaa Macmalkaaga haddii la xaday. Uma baahnid inaad shaqeyn kartid haddii aadan rabin. Guji badhanka ama badhanka Hadda.
Shuruudaha iyo shuruudaha isticmaalka OS X, iCloud, Center Game, iyo adeegyada la xidhiidha ayaa muujinaya. Akhriso shuruudaha liisanka, ka dibna guji Abriig si aad u sii wadato.
Xaashidu waxay hoos u dhigi doontaa, waydiineysaa haddii aad runtii, run ahaantii isku raacdey. Guji badhanka Waalidka, waqtigaas oo leh dareen.
Tallaabada xigta waxay ku weydiineysaa haddii aad rabto inaad sameyso iCloud Keychain. Adeeggani wuxuu isku-duwayaa qalab aad u kala duwan oo Apple-ka ah si aad u isticmaasho furaha isku midka ah, oo ku jira furaha ereyada iyo macluumaadka kale ee aad go'aansatay inaad ku keydiso keykain. Haddii aad isticmaalaysay iCloud Keychain horay, oo aad rabto inaad sii wado, waxaan soo jeedinayaa xulashada Set Up iCloud Keychain. Haddii aanad isticmaalin adeegga ICloud Keychain horey, waxaan ku talineynaa in la doorto Later Up kadibna raaco hagidkayaga si aan u dhisno oo u isticmaalno iCloud Keychain . Hannaanku waa mid aad u adag, waana inaad faham fiican ka qabtaa arrimaha amniga ka hor intaadan raacin jiheeye si aad u sameyso. Samee xulashadaada, oo guji Sii wad.
Wizardka aasaasiga ah wuxuu dhammeeyaa hanaanka konfatiijka kadibna wuxuu muujinayaa mashiinkaaga cusub ee OS X Capitol OS.
Qaado nasasho yar, oo eeg hareeraha. Ka sokow sawirka desktop-ka caadiga ah ee muuqaalka qaboobaha ee dooxada Yosemite, oo dhamaystiran la leh Al Capitan xajmiga wareegga hore, OS-laftiisa ayaa u qalma aragti dhaw. Isku day dhowr barnaamijyo asaasi ah. Waxaa laga yaabaa inaad ogaato qaar ka mid ah ma shaqeynayaan sida aad u xusuusto. Xusuustaada aan ku guulaysan; OS X El Capitan ayaa laga yaabaa in ay dib u dhigto nidaam door ah oo dhowr ah oo ay ku habboon yihiin. Waqti u qaad si aad u ogaatid qaybta Nidaamka Xulashada si aad dib ugu noqotid sida aad u jeceshahay.
Ha iloobin qaar ka mid ah waxyaabaha la kala dooran karo ee aad u baahneyd in la soo daayo intii lagu jiray kuraasta, sida sameynta iCloud iyo iCloud Keychain .
La cusbooneysiiyay: 10/6/2015
Sidee loo kaydiyaa boggaga Safari ee Safari ee OS X
Sida Loo Isticmaalayo Isticmaalka Khariidadaha Mac App
Helitaanka Macadkaaga u Diyaargarowga OS X Mavericks
Tilmaamaha Macquulka ah ee MacBookinta
Helitaanka Your AOL Email isticmaalaya Apple Mail ah
Kordhinta Kaydinta Dhexdhexaadinta Dibedda ee Macmalkaaga
Sidee Safar Safari ugu noqotaa Qalabka Default
Isticmaalida Automator si loo Magacaabo Faylasha iyo Fader
U suurta galinta GPS-ga ee bilaashka ah
Sida loo soo diro Sawirada ama Fiidiyooga Twitter-ka iPad
Sidee looga qaybgalaa Kulan Online ah
Netstat - Command Linux - Unix Command
Sida loo sameeyo Xeerka E-mail ee Macaamiisha
Qalabaynta R-20B Klipsch R-20B / Qalabka Nidaamka Subwooferka
Isticmaalka garoonka Express iyo AirPlay ee Sonos
All About ku saabsan Second Generation Apple TV
Sida Loo Beddelo Cinwaankaaga Shabakadda Bulshada ee ugu weyn
Yaa Yaa Yeelay iPod?
Sida loo soo bandhigo Bar Barashada Internet Explorer
Taariikhda iPod: Laga bilaabo IPodka koowaad ee iPod Classic
Hagaha Noocyada kala duwan ee Wareegyada HD
Abuurista Xayeysiiska 'p' iyo 'br' Tags
Nidaamka Internetka Domain Name - Waa maxay DNS?
Google Notifier for Mac OS X 1.10.4 - Gmail E-Mail Checker
Dib-u-eegista iPhone-ka ee Dib-u-eegida